जंगलमा आगो, बाढीमा डुब्दै गरेको शहर र असह्य गर्मी के हुँदैछ विश्वमा? - Malayakhabar
होम पेज फिचर जंगलमा आगो, बाढीमा डुब्दै गरेको शहर र असह्य गर्मी के हुँदैछ विश्वमा?
एजेन्सी := विश्वमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । कतै बाढी, कतै असह्य गर्मीको कहर त कतै जंगलमा भीषण आगो , यही विपत्तिहरुले मानिसलाई घेरिरहेको छ ।वैज्ञानिकहरुले भनाई छ कि यी मध्य धेरै घटनाको सम्बन्ध मानिसद्धारा गरिएको जलवायु परिवर्तनमा असर पर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ र आउने समयमा यसको क्षतिको भविष्यवाणी गर्न अहिले मुस्किल हुन सक्छ ।
चीनको झोगंझाउ शहरमा १९ जुलाईमा यति भीषण बर्षा भयो कि त्याहाँ पुरै वर्षभरीमा हुने पानी एकै दिन पर्यो करीब ६२४ मिलिलिटर । यस बाढीका कारण दुई लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्यो भने दर्जनौ मानिसकहरुको ज्यान गयो ।
यसै घटनाको एक साता पहिला पश्चिम जर्मनीलाई बाढीले ठूलो क्षत विक्षत बनायो । आधिकारीक आकँडा अनुसार जर्मन सहितका ती देशमा मृत्यु हुनेको संख्या मात्र १७७ रहेको छ भने सय भन्दा बढी मानिस अझै वेपत्ता छन् । यस बाढीको असर छिमेकी देश बेल्जियममा पनि देखियो जहाँ ३७ जनाको मृत्यु भयो । चीनले जस्तै दुई युरोपेली देशले असामान्य वर्षाको सामना गरे । यस घटनालाई जर्मन चान्सलर एङगेला मर्केलले जलवायु परिवर्तनलाई नै दोषी ठहर्याएकी छन् ।
प्रशिद्ध भारतीय जलवायु वैज्ञानिक क्यालिफोर्निया विश्व विद्यालयका प्रोफेसर वीरभद्रन रामनाथन भन्छन्, जर्मनी जस्ता अत्याधिक उन्नत देशमा बाढीले यति धेरै मान्छेको मृत्यु भएको देखेर मलाई चिन्ता लाग्छ कि ग्लोबल वार्मिङको सामना गर्नका लागि आखिर समाज कति तयार छ ? उनले आगामी २० वर्षमा मौसम सम्बन्धि घटनाहरु झन खराब हुँदै जाने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
पछिल्लो दुई दशकदेखि नै वैज्ञानिकहरुले खराब मौसमसँग सम्बन्धित घटनाहरु र ग्रिन हाउस ग्यासको मानव उत्सर्जनद्धारा सञ्चालित ग्लोबल वार्मिङको बीचमा संभावित सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, वैज्ञानिकहरुले खराख मौसमको घटना प्राकृतिक रहेकोमा आम सहमति जनाए पनि मानवद्धारा सिर्जिन जलवायु परिवर्तनका घटनाले यस्ता घटना अधिक र तीव्र हुने अनुमान गरेका छन् ।
यो स्पष्ट छ कि २०२१ मा विश्वमा मौसमको तापमान लगातार रेकर्ड ब्रेक हुँदै गएको छ । पछिल्लो महिना अमेरीका र क्यानडाको एक ठूलो क्षेत्रमा गर्मीले ठूलो असर गर्यो र जुन महिना तनावपूर्ण रह्यो । कति नागरिकको ज्यान समेत गर्मीकै कारण गयो । क्यानडामा त एक स्थानमा गर्मीका कारण जंगलमा आगो लागेका कारण ब्रिटिश कोलंवियाको एक पुरै गाँउ जलेर खरानी भयो । क्यानडापछि साईप्रसमा पनि त्यस्तै भयो ।
त्याहाँ ठूला जंगलमा लागेको आगो पनि चुनौती बन्यो ।
क्यालिफोर्नियामा यस वर्ष ४९०० भन्दा बढी घटनाहरु दर्ता भए। पछिल्लो २०२० को तुलनामा यो सात सयले बढी हो ।
उता मस्कोमा पनि यो वर्ष १२० वर्ष पछि सबै भन्दा धेरै गर्मी भयो । यस बाहेक सर्बिया, जो सबै भन्दा चिसो क्षेत्र मध्य एक हो त्याहाँ पनि जुलाईमा गर्मी निकै भयो । भारतको राजधानी दिल्लीमा पनि गर्मी र बर्षाको रेकर्ड नै बनेको थियो । मौसम विशेषज्ञ मैक्सिमिलियानो हेरेराले यो वर्ष २६ देशमा २६० वटा ताममान उच्च वृद्धिको घटना भएको दाबी गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तन बारे अध्ययन गर्ने प्रभावशाली संस्था रोयल नेदरल्याण्ड विज्ञान संस्थानको एक रिपोर्टमा जलवायु शोधकर्ता गीर्ट जान वैन ओल्डनबर्गले मौसम परिवर्तनको अहिले संख्या रेकर्ड ब्रेक गर्ने खालको रहेको र यस्तो अपेक्षा नगरिएको बताए। बीबीसीका पर्यावरण विष्लेषक रोजर हेराबिनका अनुसार जलवायु वैज्ञानिकले वर्षौदेखि चेतावनी दिईरहेका थिए कि तीव्र गतिमा गर्मी हुने जलवायुले दुनियामा भारी वर्षाको संभावनाका साथै हानीकारक हिटवेभ पैदा गर्नेछन् ।
उदाहरणका लागि सन् २००४ मा वैज्ञानिकहरले एक खाले गर्मीको अध्ययन गरेका थिए । जसले पुरै युरोपमा करीब ३० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । यसको निष्कर्ष के निकालेका थिए भने २० औँ शताव्दीमा मानव निर्मित उत्सर्जनले यस प्रकारको घटनाको संभावनालाई दुई गुणा बढाएको छ । तर विषेज्ञहरुले भनेका छन् कि यस तरीकाको चरम सीमाहरुको भविष्यवाणी गर्न कठिन हँुदै गएको छ र जर्मन बेल्जियमको बाढी र उत्तर अमेरीकाको हिट वेभ तीव्रताको भविष्यवाणी गर्न असफल रहियो ।
बेलायतका मौसम विभागका पूर्व प्रमुख प्रोफेसर डेम जुलिया स्लिंगोले मौसमको पूर्व जानकरी दिने मोडेलमा नयाँ छलाङ ल्याउन जरुरी रहेको र यसले चरम परिस्थितिको सही भविष्यवाणी गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । वेश्विक सोध समुह वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन का अनुसार उत्तर अमेरीकामा देखिएको हिट वेभ ( अत्याधिक गर्मी ) यति चरम थियो कि ऐतिहासिक रुपबाट देखिएको तापमानको सीमाभन्दा टाढा थियो ।
यो स्पष्ट रुपले जलवायु परिवर्तनको कारण थियो । यो टिमले जर्मनी र बेल्जियमको बाढीको पनि विष्लेषण गरीरहेको छ र अगष्टको मध्यमा यसको रिपोर्ट आउनेछ । डा. वेन ओल्डनवर्गले जलवायु परिवर्तनका कारण भारी वर्षा अधिक हुने र पछिल्लो केही वर्षयता चरम मौसमका घटना मानव निर्मित जलवायु परिवर्तनको प्रभावको प्रमाण भएको बताए ।
विद्यमान पृष्टभूमिलाई ध्यानमा राखेर दुनियाभरका तमाम नेता यसै वर्ष नोभमेम्बरमा स्कटल्याण्डमा हुने सँयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा भाग लिँदैछन् । यसमा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने योजना पेश हुने अनुमान गरिएको छ ।
वैज्ञानिक तथा नेताहरु तापमानको २ डिग्री सेल्सियस भन्दा तल र १.५ डिग्रीको हाराहारीमा राख्नु पर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् ।
रामनाथनले २०३० सम्ममै ग्लोवल वार्मिङ १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरेका छन् ।त्यसपछि २०४० पछि पृथ्वीमा फेरी चिसो बढ्ने रामनाथनको अनुमान छ । संयुक्त राष्ट्र संघका जलवायु परिवर्तन विषयका कार्यकारी सचिव, पेट्रीसिया एस्पिनोसाले पनि यस प्रकारको चेतावनी दिएका थिए । अब हामी के देख्दैछौँ भने जंगलको आगो,सुख्खापन, तुफान जस्ता घातक घटना । हामीलाई संख्या आकंडा अमुल्य छ तर अब जलवायु सम्बन्धि शसक्त कार्ययोजनाको खाँचो छ ।
-बिबिसीमा प्रकाशित रिपोर्टमा आधारित
अघिल्लो लेख ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को फाइनलमा यि चारजना प्रतियोगी भिड्ने।
पछिल्लो लेख वैदेशिक रोजगारीमा एक वर्षमा १२ सयबढी नेपालीको मृत्यु, मलेसियामा २ सय ८० जना।